Izinwele ezomileyo. Yintoni endiyenzayo ukuba ndiyenze xa iinwele zam zomeleleyo kwaye zincinci? Indlela yokunyusa iinwele ekhaya?
Iingcebiso ezimbalwa zokunceda ukubuyisela iinwele ezinomileyo nezomileyo.
Izibonakaliso zeenwele zokungcola ziqhelekile phantse ngamnye wethu: iitshizi zivuthiwe, zikhuni, zikhukhume, zihlukane. Ngamanye amaxesha imbangela yenkathazo yintsholongwane, kodwa ngokuphindaphindiweyo iinwele zome ngenxa yephutha lethu. Yintoni esiyiphuthayo? Amantombazana amaninzi ayazibuza ukuba angayenza njani inqabileyo inwele kwaye ikhwebu, kodwa, hayi, ayikwazi ukuyifumana impendulo kuyo. Kwaye safumana, kwaye siya kukuxelela ngako.
Yintoni endiyenzayo? Ziziphi iintloni zethu ezinkwantya?
Okokuqala, cwangcisa ukutya: Yidla ukutya okuninzi ngamavithamini A (caviar, isibindi, amaqanda, ubisi) kunye neF (i-linseed, soy and oil sunflower, i-almonds, i-peanuts). Ngokuqhelekileyo zidla iintlanzi ezinamanci - i-herring, i-trout, i-salmon, i-salmon. Izityebi kwi-omega-3 fatty acids, ezijongene nokuhambisa amanzi kwiiseli. Intlanzi kufuneka ibe kwitafile yakho ubuncinane kabini ngeveki. Ngexesha lokubuyiselwa kweenwele, kungcono ukuyeka ukutya okunomsoco. Yidla izityalo kunye nemifuno eninzi kangangoko kunokwenzeka. Eyona nto iluncedo yi-persimmon, i-oranges, izaqathe, iklabishi.
Okokuqala, khusela izitshixo zakho kwiindawo ezifudumeleyo: i-dryer yomoya oshisayo kunye ne-red-hot stylers.
Okwesibini, ukujonga umgangatho wezonyango (iziyobisi kunye notywala ziphikisana) kwaye rhoqo zisebenzisa ukubuyiswa kwemaski.
Okwesithathu, musa ukuhlamba intloko yakho ngamanzi anzima. Ukunciphisa, i-baking soda okanye i-glycerin (i-1 ithispoon nge-1 litre) ifanelekile. Ngendlela, amanzi atshisayo avula ii-pores ze-cuticle nangakumbi. Kwaye, ngaphandle koko, ukutshisa amanzi, ukhathaza ngakumbi i-chlorine esetyenziselwa ukukhutshwa komzimba. Ungakulibali ukusebenzisa i-conditioner rhoqo xa uhlamba iinwele zakho.
Umsebenzi oyintloko we-conditioner uyangxuma. I-conditioner (1-2 izinto ze-spoon) zibeka i-washed and wring out hair in bonke ubude, ungagxibanga esikhumbeni. Nika ingqalelo ekhethekileyo kwiingcebiso - zixakeke kakhulu. Khumbula ukuba i-balm iyahlanjwa kabini ngelixa i-shampoo.
Impembelelo entle kukuhlanjululwa kweenwele kunye ne-decoction ye-herbal - i-nettle, ukusuka kwintlanzi ye-horsetail okanye i-birch. Ukwenza oku, 4 tbsp. Iifuni zotshani obomileyo zithela ilitha lamanzi abilayo, zizise kwimathumba, zipholile kwaye zixakeke.
Iphuzu elibalulekileyo: ngaphambi kokuqala kwekhosi yokufumana, kufuneka unqume iinwele zakho. Iindawo ezingonakaliswe phantsi, iinyawo ziza kuzuza amandla. Bayasabela njani nayiphi na impembelelo engqongileyo.
Indlela yokunyusa iinwele ezinomileyo kakhulu
Ziziphi iintloni zethu ezinkwantya?
Ilanga nomoya owomileyo yizona iintshaba ezinkulu zeenwele zethu. Zama ukugqoka i-headdress ngexesha lokusebenza kwelanga. Ukongezelela, kwiinyanga ezintandathu ezizayo iinqanawa, ii-caps kunye nezikhwama ziya kuthandwa kakhulu. Kuyafaneleka ukufumana izimonyo nge-UV filters (ungakulibali ukuthabatha nawe kwiholide).
Iimpawu zezinwele kunye neenwele
Ngokukodwa xa wenza le ndlela yokupakisha imihla ngemihla ngeenyanga. Ngoxa iipilisi zigule, imisila, i-pigtails, iifake kunye namaqhina ziyi-tab. Musa ukuwaxhaphaza, kwaye xa uboya buya kuba ngcono ungabinwele ubunwele ngaphezu kwesinye ngeveki.
Amacangci amachule kunye namaqabane
Okokuqala, sithetha ngezixhobo zetsimbi. Kodwa nakwimithi kwezinye iimeko kunokubangela ingozi, ukuba ngaba i-jags. Hlola umgangatho weemveliso ngokuzibamba entendeni yesandla sakho.
Kwiimeko ezixinezelekileyo, i-60% yeenwele iwela kwisigaba sokuphela kokukhula! Kunzima ukuzibuyisela. Yiba nesigulane - umphumo uya kuba, kodwa kungekuqaleni kweenyanga ezimbalwa.
Ukusebenzisa ama-air conditioners akusebenzi? Zama izilwanyana zabantu. Mhlawumbi, ngenxa yakho baya kusebenza ngakumbi. Ungasebenzisa imaski ukuqinisa ii-curls ezikhululiwe. Ukupheka kulula kakhulu. Kwanele ukudibanisa kwiinqwelo ezilinganayo zeoli yeoli kunye nejusi enomsi. Ngokuhlwa, gubungela umxube kwiingcambu uze ufake isigqoko. Ngentsasa, hlamba iinwele zakho nge-shampoo.
I-Rinser ezinwele ezinwele
Brew 2 ilitha. itiye eluhlaza kunye ne-chill. Emva kokuhlamba, hlambulula iinwele zakho ngokufakelwa. Leli pheyitha lingasetyenziselwa njengeliso - thintela kwiingcambu zeenwele kwiyure nesiqingatha ngaphambi kokuhlamba.
I-Plasmolifting yeenwele: ukuvuselelwa kweenwele
Ubundlobongela bentsha: izizathu kunye neendlela zokulwa
Indlela yokwenza ubutyebi, ngokwezinto eziphathekayo, umntu
Ukuziphatha xa udibana nendoda
Indlela yokuba ngumnikazi wenkampani ye-press and model model: iimfihlo ze-actress Natalia Rudova
Ukuba umntu uhlala ecela imali
Ibhinqa liyinkosikazi, indoda ikhoboka